TSIGIRA-NINGBO CHEM-PLUS & JW FILM
JW Firimu / akasarudzika pendi ekudzivirira mafirimu. Isu tinonyorera kurudzidziso rwekuti isu tichazongobudirira sezvakaita vatengi vedu. Chikamu chakakosha chekuti tinotsigira sei kuedza kwevatengi vedu kuri kuburikidza nemasevhisi edu epamusoro ekutsigira.
Nepo vashandi vedu vehunyanzvi hwekutsigira varipo kuti vakubatsire Muvhuro kusvika Chishanu kubva na8: 30 mangwanani kusvika na5: 30 masikati, nyaya dzinogona kugadziriswa zviri nyore kuburikidza nerutsigiro rwedu rwepamhepo. Pano, iwe unowana yakazara yekumisikidza mirairo, mhinduro kumibvunzo inowanzo bvunzwa, matipi ekumisikidza, pamwe neakateedzana ekumisikidza mafoto uye mavhidhiyo mavhidhiyo. Kana iwe uchiri kutadza kugadzirisa nyaya yehunyanzvi mushure mekubhurawuza saiti, unogona kusarudza kuonana nedhipatimendi rekutsigira nerunhare nefoni yemahara pa0086-574-89257752, kana titumire chikumbiro kuburikidza nefomu yedu yekutsigira.
JW Firimu / akasarudzika pendi ekudzivirira mafirimu. Kuti uve wakasununguka mukukanganisa kugadzirwa kwemakore mashanu kubva pazuva raakatenga. Zvakaremara zvakafukidzwa zvinosanganisira: kuita yero, kudonha, kutsemuka, kuputika uye kupwanya.
Kuti uwane chikumbiro, tanga waedza kutaura nemvumo yeKPAL inosimudza iyo yakagadzira iyo yekumisikidza. Kana iwe usingakwanise kubata neyepakutanga mvumo kpal simaki, chero chikonzero, ndapota nyorera KPAL. Iwe unofanirwa kuchengetedza kadhi yewarandi, kopi yerisiti yako yepakutanga inoratidza nzvimbo dzekuvhara uye wotumira kuKPAL sekukumbirwa kuti uite yako yekuda. Nezvechokwadi zvirevo, KPAL ichave nemvumo KPAL inosimudza kubvisa uye kunyorera zvakare KPAL yekudzivirira firimu kunzvimbo dzakatemerwa kufukidzwa newarandi inosanganisira zvikamu uye basa.
Iyo garandi uye mishonga yakatsanangurwa pamusoro apa ndiwo chete mawaranti anowanikwa. Mvumo KPAL vanoisa havana mvumo yekugadzirisa kana kuwedzera warandi mune chero fashoni. KPAL ichave yega ine basa rekuona kutendeseka kwezvose zvirevo uye inochengetera kodzero yekuramba zvirevo zvisingaenderane nezvinotsanangurwa pamusoro apa. kutsiva kweiyo isina kukwana firimu, kusanganisira zvikamu uye basa, ndiyo chete mushonga; Mhosva hairegi kune chero kumwe kukuvara, zvine mutsindo, zvichiteerana, kana neimwe nzira. Kubhadharwa kwemitero yevashandi yakafukidzwa newadhi iyi ichaitwa yakanangana neakagamuchirwa kpal inosimudza uye ichaverengerwa nekushandisa mari yekufukidzira yakaburitswa neKPAL.